အတ္တ၏ ဒဏ်ရာများ: တရားထိုင်ပုံထိုင်နည်း
တရားထိုင်တဲ့အခါ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ပါ၊ ခါးကိုဖြောင့်ဖြောင့် မတ်မတ်ထားပါ။ ရှေ့လဲ မငိုက်နဲ့ ဘေးလဲ မစောင်းနဲ့၊ ခေါင်းလည်း ဘယ်ဘက်မှ မစောင်းပါနဲ့၊ မင်းရဲ့ခါးအထက်ပိုင်း ကိုယ်ကြီးဟာ ရှေ့ - နောက် ၊ ဘေး ယိမ်းယိုင်နေရင် အရိုးအဆစ်တွေ အဆက်ချင်းတည့်တည့်(တဲ့တဲ့) မနေတဲ့အတွက် မကြာခင် နာလိမ့်မယ်။ ဝေဒနာကိုတွေ့ဖို့ရာထားဦး၊ သမာဓိကိုရအောင်တောင် မထိုင်နိုင်ပဲ နေရမှာစိုးတယ်။ ခါးအောက်ဖိထားလို့ ရှိရင် သွေးလွှတ်ကြော၊ သွေးပြန်ကြော ကိုက်ခဲလာမယ်။ ဒီတော့ ထိုင်နည်းမမှန်ရင် ဝေဒနာကို တမင်လုပ်ပြီး ယူရာကျမယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ တရားထိုင်စ ယောဂီတွေအတွက် အရေးကြီးတယ်။
ယောဂီများဟာ မိမိတို့ကြို့က်တဲ့ ဣရိယာပုထ် (အနေအထား)နဲ့ အားထုတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်ခြင်း ဣရိယာပုထ်ဖြင့် အားထုတ်တာက စိတ်ငြိမ်မှု သမာဓိရလွယ်လို့ ပိုကောင်းတယ်။ ၀င်သက်၊ ထွက်သက်ကို မှန်မှန်ရှုရှိုက်ရမယ်။ သိပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရှုရှိုက်လို့ရှိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညှင်းဆဲရာကျမယ်။
(၀င်သက်)ရှူလိုက်တဲ့အခါ၊ လေထဲမှာရှိနေတဲ့ တေဇောဓာတ်ဟာ အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ လေအိတ်ကလေးများစွာ ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အပူခွန်အား( တေဇောဓာတ်) ရရှိတယ်။
ဒါကြောင့် အဆုတ်ထဲရောက်အောင် အသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါတိုင်း၊ အဆုတ်ဟာကျယ်ပြန့် သွားနိုင်အောင် ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းကို တရားထိုင်တဲ့အခါ တည့်တည့်မတ်မတ်ထားရမယ်။ အဲဒီလိုထားရင် အဆုတ်လေအိတ်ကလေးတွေ လေပြည့်နေမယ်။ လေပြည့်နေမှ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို နာရီများစွာ တရားထိုင်နိုင်မယ်။
အဆုတ်ကိုလေအပြည့် မသွင်းနိုင်ရင် မောပန်းလာမယ်။ ဒီအချက်ဟာ တရားထိုင်တဲ့ ယောဂီများအတွက် အရေးကြီးတယ်။ ၀င်လေကို တစ်ခါပြင်းပြင်း ရှူထုတ်လိုက်ရင် နှလုံးဟာ ၄-ကြိမ်လှုပ်ရှားရမယ်။
ညှစ်ထုတ်ရမယ်။ တစ်မိနစ်မှာ ၁၆-ကြိမ်မှ ၁၈-ကြိမ်အထိ အသက်ရှူရှိုက်ရတယ်။ နှလုံးကတော့ (၆၄) မှ (၇၂) အထိ လှုပ်ရှားညှစ်ထုတ်ရတော့၊ အသက်(လေ) ကိုမြန်မြန် ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ရင် နှလုံးဟာ ဘယ်လောက် အလုပ်များပြီး ပင်ပန်းမလဲ၊ တရားမပဲ ရောဂါရဖို့ သေချာတယ်။
အဆုတ်ရဲ့အင်အားနဲ့ ယူဆောင်လာတဲ့ တေဇောဓာတ်(အပူ)က အစာအိမ်၊ အူသိမ်၊ အူငယ်များကို ပြုပြင်ပေးလိုက်တော့ အစာအဟာရ ကြေညှက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ ဒီအပြင် ဒီသွေးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အသီးသီးမှာ ဘေးဖြစ်စေတဲ့ အညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက် အပျက်အစီးများကို သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများမှတစ်ဆင့် ချွေး၊ အခိုး၊ အငွေ့၊ ကျင်ငယ် အဖြစ်ဖြင့် အပြင်ထုတ်ပေးတယ်။
အဆုတ်မှတစ်ဆင့် အဆိပ်အတောက်နဲ့ မကောင်းတဲ့ အခိုးအငွေ့များပါလာတဲ့ လေကို ထွက်သက်လေဖြင့် ထုတ်ပစ်တယ်။ သွေးဟာ နှလုံးခုန်ခြင်းအားဖြင့် သွေးကြောထဲမှ ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်နဲ့ လည်ပတ်ပြီး မကောင်းတဲ့ သွေးညိုသွေးပုပ်တွေကို နှလုံးထဲက အဆုတ်ထဲ တွန်းလိုက်တော့ မကောင်းတဲ့သွေးမှာ (တေဇောအသစ်) တစ်ဘက်နှလုံးထဲမှ သွေးနီအကောင်းပြန်လည်ရရှိပါတယ်။
အဲဒီကတစ်ဖန် မကောင်းတဲ့ အညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက် အပျက်အစီးများကို ချွေး၊ ကျင်ငယ်၊ အငွေ့အသက်ဖြင့် ပြန်ထုတ်ပြီး တစ်ပတ်လည်နေလို့ ငါတို့မင်းတို့ အသက်ရှင်နေတယ်လို့ ခေါ်ရတာပဲ၊ တို့ရဲ့နှလုံးဟာ လက်သီးဆုပ်ပမာဏရှိတယ်။
အတွင်းမှာ အခေါင်းကြီးရှိတယ်။ ဒီအခေါင်းကြီးအတွင်းမှာ တစ်ဆုပ်စာလောက်( အသစ်အသစ်ဖြစ်နေတဲ့) နှလုံးသွေးနီ (တေဇော) ဟာရှိနေတယ်။ အဲဒီကောင်းတဲ့သွေးကို အသက်တစ်ခါရှူရင် တစ်ကိုယ်လုံးနှံ့အောင် ၄-ကြိမ်ညှစ်ပို့ရတယ်။ နှလုံးသားကို ဖြူချောပါးလှပ်တဲ့ အမြှေးလွှာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတယ်။ ဒီနှလုံးသားရဲ့ ညာဘက်ခန်းကတော့ မကောင်းတဲ့သွေးညိုတွေကို အဆုတ်ထဲ တွန်းပို့ပေးတယ်။
အဲဒီလက်တစ်ဆုပ်စာရှိတဲ့ သွေးကို ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်က မှီနေတယ်။ ဒီဟဒယ၀တ္ထုရုပ်ကို မနောဓာတ်၊ မနောဝိညာဏဓာတ်၊ စိတ်၊ စေတသိက်တို့က မှီတည်နေတယ်။ ဒီမနောဝိညာဏဓာတ်စိတ်တွေက စေခိုင်းရာကို ဒီရုပ်တွေက လိုက်လိုက်လုပ်နေရတာပဲ၊ အထည်ကိုယ်မရှိတဲ့ စိတ်ဟာ နှလုံးတည်းဟူသော လိုဏ်ဂူထဲမှာကိန်းနေတယ်လို့ ဘုရားက ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာ ဟောတယ်။
စိတ် စေတသိက်တို့ရဲ့ အစွမ်းအာနုဘော်ကြောင့် နှလုံးဘူးအတွင်းရှိ တစ်ဆုပ်စာမျှရှိတဲ့ နှလုံးသွေးဟာ အဆင်း အမျိုးမျိုးပေါ်လာရတယ်။
(၁) ရာဂ အားကြီးစွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဟင်းသာပြဒါးရေလို နီနီရဲရဲ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
(၂) ဒေါသ အားကြီးစွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ မဲပုပ်ပုပ် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
(၃) မောဟ အားကြီးစွာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ အမဲသားဆေးရေလို နီကျဲကျဲ ဖြစ်လာတယ်။
(၄) ၀ိတက် အားကြီးတဲ့အခါ ပဲပိဇတ်ပြုရေလို နီနောက်နောက် ဖြစ်လာတယ်။
(၅) သဒ္ဓါအားကြီးစွာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ၀ါဖျော့ဖျော့နေရာမှ အ၀ါအရင့် ဖြစ်လာတယ်။
(၆) ပညာအားကြီးစွာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူရာမှ မှန်ကဲ့သို့ ကြည်လင်လာပြီး ပတ္တမြားလို အလင်းရောင်တွေ တောက်ပလာမယ်။
(စရိုက် ၆-ပါးအလိုက် အသွေးအရောင် ပြောင်းလဲပုံ ကောင်းကောင်းမှတ်ထားပါ။)
ဒီနှလုံးကညှစ်လိုက်တော့ ဗဟိုသွေးကြောက တစ်ကိုလုံး ပျံ့နှံ့သွားတော့ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့သူဟာ မဲပုပ်ပုပ် သွေးများ တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့သွားတယ်။ အသားတွေလဲ ဒေါသဖြစ်လွန်းတော့ နီပြီးတုန်လာတာတွေ့ရတယ်။ အေး ... နောက်တော့ ညိုပုပ်လာပြီး မကောင်းတဲ့ ပြစ်မှုမျိုးစုံ ကျူးလွန်တော့တဲ့အထိ ဖြစ်လာတာပေါ့။
ဘုရား၊ ရဟန္တာများကျတော့ နှလုံးသွေးဟာ အထူးကြည်လင်လို့ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေဟာ တစ်ကိုယ်လုံး တောက်ပလာပြီး ရောင်ခြည်လွှတ်တဲ့အထိ ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ ရူးသွားတာလဲ ဒီနှလုံးသွေးပဲကွ၊ ကြောက်အားကြီးရင်လည်း ဒီနှလုံးသွေးက အေးပြီး ပြစ်ချွဲလာတော့ တစ်ကိုယ်လုံး အေးစက်လာတယ်။
အအေးလွန်လို့ ပြစ်ချွဲလာပြီး နှလုံးသွေးရပ်သွားတော့ သေရတောပေါ့။ ဒီနှလုံးသွေးထွက်ရာ အ၀င်ဝမှာ အဆိုရှင်လိပ်ပြာတောင် ကလေး ၂-ခုရှိတယ်။ စိတ်၊ စိတ္တဇ၊ ဥတုဇလေကြောင့် ဒီလိပ်ပြာတောင်ကလေး ၂-ခုဟာ အချက်ကျကျ ခတ်ပေးလိုက်လို့ ဒီသွေးတွေဟာ ဒိတ်-ဒိတ်၊ ဒိတ်- ဒိတ်နဲ့ အချက်ကျကျ တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့နေတာပေါ့။
ဒီစိတ်ဟာ နှလုံးသွေးကိုမှီတယ်၊ ဒီနှလုံးသွေး ဖောက်ရင် စိတ်လည်းဖောက်ပြန်လာတယ်။ ဒါသေသေချာချာ မှတ်ထားကြနော်...။ လည်ပင်းသွေးကြော ၂-ခုကိုဖိနှိပ်ထားလိုက်ရင် နှလုံးသွေးကြောနဲ့ တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတော့ သွေးဖောက်ပြန်ပြီး ဘ၀င်ကျမေ့သွားတတ်တယ်။
အေး.. ဒါကြောင့် တရားထိုင်ချိန်မှာ လည်ပင်းကို ရှေ့နောက်ဝဲယာ စောင့်ငဲ့နေရင် အချိန်ကြာမြင့်တော့ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေမေ့ မျောနေတတ်တယ်။
ဒါဟာ တရားအားထုတ်တဲ့ ယောဂီတွေ ကြပ်ကြပ် သတိထားဖို့လိုတယ်။
လို့.. အမြဲသတိပေးနေရတာပေါ့။ တစ်ခါမှ အားမထုတ်ဖူးတဲ့ယောဂီများကို ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ဓာတ်သဘောနဲ့ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းနေတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပြီးပြီ၊ တရားအားထုတ်ဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။
ကဲ - ထိုင်ကြည့်ကြစို့။
posted by အတ္တ @ April 27, 20102Comments
At April 27, 2010 at 6:29 PM , Anonymous said...
Thanks you for very nice post.
At April 28, 2010 at 6:36 PM , Anonymous said...